Mihorohoro ny ao an-dapa fa ho tonga i Dada ! – MyDago.com aime Madagascar
Ireto indray ny tatitry ny kabary tetsy amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka tamin’ity 05 Jolay ity :
Gahby : Taranak’i Radama faharoa ny teraky Vakiniadiana ary ao aminay ny fitiavan-tanindrazana. Ny anay rehefa efa eny dia eny, rehefa tsia dia tsia , izay nanao soa ny fiainan’ny vahoaka ihany no tena mpitondra mahay dia tsy iza izany fa ilay mpitondra ronono. Raisinay ho fahavalom-pirenena izay mandroba ny firenena ary manompo ny mpanjan-tany.
Doc Julien : lasa hoatran’ny mpanohitra ny mpanao gazety ao amin’ny free fm satria tsy tafiditra ministra. Ianao Sareraka indray no mpitsikera ny mpitondra rehetra teo fa vao nahazo toerana dia nangina sy mikipy na milaza ny ampahany ny marina. Ravao ny rafitra raha mahita ianao fa mandroba ianareo.
Depioté Henri :ilaina ny mifanotrona, hampiseho hery isika ny 7 sy 8 Jolay. Tsy haharesy dohika ny Sadc ny kobaka am-bavan’ ny FAT, tsy tanteraka ilay miady an-trano tetehan’ny frantsay ka dia mihorohoro saina mafy ny FAT. Salama tsara ny filoha Ravalomanana ary tsy ao Afrika Atsimo izy izao, ny tany « Kananan’ » ny malagasy dia ny fiverenan’ny ara-dalana.
Depioté Zafilahy : ny 6, 7 sy 8 febroary izao dia fenoy ny kianja, tsy afaka manome tsiny ny olona tsy tonga isika satria sarotra ny fiainana, olon’ny fo isika ka rehefa be loatra ny fanaratsina dia mamaly, lainga no betsaka.
Miara miaika izao tontolo izao fa mila mody i Ravalomanana ary ny FAT aza mahalala izany.
Na inona na inona tenenina, ny frantsay no tao am-badika ny 2009 ary natahotra ny Maorisiana fa ho lasa dragona ety amin’ny oseana Indianina i Madagasikara ka nanampy ny frantsay.
Miady amin’ny fanjanahana amin’ny endrika vaovao izahay ary tsy mitady takalony na tambiny Ravalomanana. Tandremo ny fikasana hikitika ny filoha Ravalomanana fa dia hitroatra izahay ka aoka ny tetika maloto ijanona dieny izao ry frantsay ; anay ity tany ity.
Famerenana ny tribonaly 07 febroary amin’ny 07 jolay sy ny hoe voasambotra i Haja Nirina Razafinjatovo, nisy olona vao niresaka taminy teo fa anyWashingtonizy. Fampitahorana ireny mba hisavorovoro ny saintsika ka hihemotra. Tsy mahavoky ny lainga ary tsy azo hoanina fa ny fahamasinana sy ny fahamarinana no aoka hanjaka eto ka ilay olona nametraka any io no aoka hitondra indray.
Salama tsara i Ravalomanana ary tsy ao Afrika Atsimo, aleo tsy lazaina hoe aiza, sao dia hisy hilaza indray fa voavidin’i Ravalomanana ny Sadc, Ua, Ue sy ny NU.
Marcel : rehefa hisy tokoa ny fepetra na dinika momba an’ i Madagasikaraeo amin’ny sehatra iraisam-pirenena dia manao ny ataony ny FAT dia avy eo mamadika izay tapaka. Fomba fiady ny FAT hatramin’izay io tetika io, manely tsaho hatrany.
Pasitera Mamitiana :mihorohoro ny ao an-dapa fa hotonga i Dada ary tsy dila ny volana jolay dia hiseho ny fahamarinana.Tany andafy tokoa i Yvette Sylla ka nanao tatitra fa rava ny ankolafy telo. Ho avy ny vaovao baomba amin’ny 7 sy 8 koa dia veloma ry frantsay.
Be kokoa ny maty sy ny zavatra simba tamin’ny 26 janoary mihoatra ny tamin’ny 07 febroary 2009 ka iny aloha tsaraina mialoha.
Aoka tsy ho fanambarana intsony ny fanapahan-kevitra ataonareo iraisam-pirenena fa mba ho sazy mavesatra.
Mannetana ny mpitolona ho avy manomboaka rahampitso.
1 réflexion sur « Mihorohoro ny ao an-dapa fa ho tonga i Dada ! »
Efa nanao voady kely aho any @ tanana raha tonga eo i dada , raha devoly no niditra tao amin’ireo mpanongam-panjakana ireo dia mba afakin’ny mpiandry ihany fa ny hidiran’ny Foza hono no tena « GRAVE » be
Précédent Article précédent : Ireo porofo sy tsiambara-telo momba ny raharaha 07 Febroary
Suivant Article suivant : Grêve et arrestation continuent…